UNtseki uncoma uhlaka lokukhulisa abafana enkulisa yeChiefs
September 7, 2021 Impempe.com
UKaizer Motaung noMolefi Ntseki
Inhloko yezokuqeqesha nokuthuthukiswa kwamakhono kubafana abasebancane kwiKaizer Chiefs uMolefi Ntseki uchazekile ngendlela leli qembu eliyiqale ngayo isizini.
IChiefs ibuya kwisizini ebinzima kodwa isikhwama esinezindaba ezinhle nezimbi. Ingene emaqenjini ayishiyagalombi aphezulu kwiDStv Premiership sekuvalwe amehlo.
Kodwa ihambe yaze yayobanjwa emdlalweni wamanqamu kwiCAF Champions League. Lokhu kubanda kweChiefs kuholele ekutheni kuxoshwe uGavin Hunt kungakapheli nonyaka eqashiwe.
Kube sekwenziwa izinguquko ezinqala ethimbeni labaqeqeshi njengoba kubuyiswe uStuart Baxter njengomqeqeshi, kwabe sekuqiniswa nangoNtseki.
IChiefs idlale ngokulingana kowodwa, yawina owodwa emidlalweni emibili esayidlalile kwiDStv Premiership. Yabambana neTS Galaxy yabe seyishaya iBaroka FC.
KwiMTN 8 yakhishwa sekukhahlelwa amaphenathi ngemuva kokubuya kade seyilandela ngemuva ngo 2-0 kwiMamemelodi Sundowns.
“Le midlalo emibili yeligi ebesibheke kuyo neGalaxy neBaroka beyibaluleke kakhulu,” usho kanje uNtseki kwabe-website yeqembu.
“Besifuna ukudlala kahle futhi siwine, sithole amaphuzu amathathu emdlalweni wokuqala ukuze sithole ukuzethemba.
“Lokho bekuyosisiza ukuze siye emdlalweni weBaroka singenayo ingcindezi enkulu futhi sesinokwethembana nokuzethemba.
“Icelo lethu bekuwukuwina kwiGalaxy, kodwa ke akwenzekanga kanjalo, sadlala ngokulingana. Kodwa iphuzu nephuzu libalulekile.
“Ayadingeka lawo maphuzu uma sekuqoqwa ngaseku[heleni kwesizini. KwiBaroka sashaya amagoli amabili esiwombeni sokuqala.
“Sahlulwa inqwaba yamagoli nenqwaba yamathuba esisiwakhe ngokudlala kahle kwethu. Sakhombisa ukuyiqonda indlela umqeqeshi afisa sidlale ngayo.
“Sabe sesingenelwa yigoli elingelihle esiwombeni sesibili, kodwa umphumela waba muhle kakhulu,” kuchaza uNtseki.
Umsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuthi iqembu elikhulu linakekelwe kahle ukuze likwazi ukuthola imiphumela emihle njalo nje kodwa kumele aqinisekise nokuthi iqembu liyaqhubeka nokukhiqiza ukhilimu wabadlali enkulisa.
Uthi useke waluhlalela phansi uhlaka lweChiefs elusebenzisa ezinkulisa zayo ukuqinisekisa ukuthi kuvundululwa amathalente bese ekhuliswa ngendlela efanele.
FUNDA NALA: IBafana ibuyise amathemba idlala kahle ngesikhathi ishaya iGhana
“Uma ubheka uhlaka lweqembu lwendlela yokudlala nokukhuliswa kwabafana abasebancane, sengike ngalucubungulisisa futhi sengiluqonda kahle.
“Kumele ngibancome abaluhlanganisa ngoba linolwazi oluqinile ngokuthi yini iqembu elifisa ukukuzuza ekukhuliseni abadlali ngokomzimba, amacebo okudlala, isimo sengqondo nokuziphatha nje jikelele,” kusho uNtseki.
Uthe indlela oluyilo akuthusi ukuthi iqembu liyakwazi ukukhipha abadlali abanekhono elihle wathi uma kungaqiniswa kokuthile kungaba ngcono kakhulu ngokuzayo.
IChiefs iyaziwa ngokuthola abadlali abahle ezinkulisa zayo kodwa babe nenkinga yokuhlulwa ukuziphatha uma sebenyuselwe eqenjini elikhulu.
Previous Previous post: Ekugcineni, iBafana ewine idlala ibhola elihle ishaya iGhana
Next Next post: Izinkunzi zaseSoweto zizobuyela kweyePremiership zibomvu izinhliziyo